म्याग्दीको कारागारमा दुई अवोध बालक अभिभावकसँगै बस्न बाध्य « News24 : Premium News Channel
म्याग्दीको कारागारमा दुई अवोध बालक अभिभावकसँगै बस्न बाध्य
म्याग्दी, २घ भदौ । बालबालिका राज्यका लागि सम्भावना हुन् । बालबालिकालाई उपयुक्त वातावरण दिनसके मुलुककै भविष्य सुन्दर बन्न सक्छ । तर, बाबु आमाको अपराधको सजाय बालबालिकाले समेत अप्रत्यक्ष भोग्नुपर्दाको पीडा कस्ले बुझ्ने ? म्याग्दी जिल्ला कारागारमा दुई निर्दोष बालक कैदी झैं जीवन विताउन बाध्य छन् ।
यी दुई अबोध बालकलाई बाहिरि संसार सायदै थाहा हो । यीनको दिनचर्या म्याग्दी जिल्ला कारागारमा विभिन्न आरोपमा जेल सजाय पाएकाहरुसँग वित्ने गरेको छ । कतव्र्य ज्यान मुद्दामा बेनी नगरपालिका–२ खवरामा अवस्थित कारागारमा जेल जीवन विताइरहेका दुई महिलाले आफ्ना सन्तानलाई कारागारमै राखेका छन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–२ रुमकी रञ्जना घर्ती क्षेत्री र बेनी नगरपालिका–९ घतानकका उत्तम र मनिषा खड्कासँग उनीको अवोध सन्तान जेलभित्र छन् । तोते बोल्ने साना–साना बालक जेलभित्रको सानो कोठामा उकसमुक जीवन बाँच्दैछन् । रञ्जना आफ्नै श्रीमानको हत्यामा र घतानका उत्तम र मनिषा भाउजुको हत्या आरोपमा कैदी जीवन विताउँदैछन् ।
तोेतेबोलीमा कखरा सिक्ने उमेरमा यो पीडा कस्ले पो बुझिदेला ? उनीहरुले संसार बुझ्नै सकेका छैनन् । शिक्षा दिने चाहना जेल जीवन विताइरहेका बालकका अभिभावकलाई नभएको होइन । लामो समयसम्म छोरालाईसंगै राख्दा भविष्यमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले उचित हेरचाह सहित शिक्षादिक्षाको ब्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गर्ने गरेको प्रहरी बताउँछन् । जेल प्रशासनले समेत प्राथमिकता दिएर रेखदेख गरिरहेको भएपनि उनीहरुलाई उचित संरक्षणको आवश्यकता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीको ठम्याईछ ।
कानुनी ब्यवस्थामा आश्रित बालबालिकालाई कैदीबन्दीसँगै थुनामा नराखेर बालसुधार गृहमा राख्नुपर्छ । कारागार भित्र क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी रहेका छन् । ६९ जना पुरुष र ४ महिला रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । जेलभित्र रहेका बालकलाई उद्धारका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले कुनै चासो देखाएका छैनन् । बालबालिकालाई नकरात्मक प्रभाव पार्न नदिन सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।